Isivivinyo 2017 - ukudla ngosuku lwe-Orthodox ngosuku, ikhalenda. Imithetho yokudla okunomsoco ngesikhathi seLent nsuku zonke
Isivivinyo 2017: ukudla kwama-Orthodox nsuku zonke kanye namasonto - Ikhalenda nemithetho yokudla ngezinsuku ngesikhathi seLent
I-Great Post ka-2017 yiyona ebaluleke kunazo zonke futhi esheshayo kunazo zonke ebuKristwini. Lokhu kunzima ukuvuswa Kuvuko lukaKristu, ngokusho ukuthi amasonto angama-Orthodox kumele adlule ngobunzima nokulinganiselwa. Ekhalendeni yesonto isikhathi seLent (February 27 kuya ku-Ephreli 15) kubhekwa njengento ethinteka kakhulu, efundisa, enomusa futhi elula. Iqiniso elilodwa elibuhlungu liwukudla okuqinile ngokuvumelana nayo yonke imithetho yokuzila nokuzijabulisa ekuzijabuliseni kwezwe. Kodwa ekubeni ne-arsenal ikhalenda yokulinganisa ezinsukwini nasemasontweni, akunzima ukunamathela emithethweni. Ngomhlaka 2017, ukudla kuncane kakhulu futhi kuyisimo esiyingqayizivele, ngakho awukwazi ukwenza ngaphandle kokucabangela, u-table kanye namathiphu. I-Great Post 2017 - ukudla kwe-orthodox ngeviki
Egameni lokusindisa imiphefumulo yabantu, uKristu wachitha izinsuku ezingama-40 ehlane ethandaza futhi elungiselela umsebenzi omkhulu. Njengoba elahlekelwe konke ukudla futhi enqaba kakhulu izilingo zikademoni, iNdodana kaNkulunkulu yadlula ukuhlolwa futhi yabuyela ngokuphepha enkonzweni yomphakathi. Ngeshwa, abapristi abaphakeme bamaJuda abazange basamukele inkolo entsha futhi bamlahla uJesu ukuba afe njengomprofethi wamanga. Ngemuva kwezinsuku ezingu-7 zekhalenda ezibizwa ngokuthi i-weekly passion, futhi uVelikden (Easter, Uvuko lukaKristu) waba ngumkhosi wokukhanya egameni loMsindisi, ohlonishwa kuze kube yilolu suku.
I-Lent Great is umjikelezo omkhulu, kuhlanganise nePhentekoste kanye nezinsuku eziyisikhombisa zeSonto eliNgcwele. Umgomo wakhe oyinhloko ukugcwalisa ubuhle nokuqedela ukuqedwa kwemibono emibi yomphefumulo womuntu. Ukuthunyelwa okunamandla akubandakanyi ukudla okufanele kuphela kwama-Orthodox amasonto, kodwa nokugcinwa okungenasisekelo kwemithetho yonke engcwele, ukwenqaba ukuzijabulisa nokuthandaza okuqotho kunomPhezukonke. Ngaphandle kwemikhawulo yokudla, ukuzithiba okungokomoya kulandela futhi:
Ukwenqaba izinjabulo zothando kanye nemibhangqwana, nabantu abangashadile;
Ukuvinjelwa kokubhema, utshwala nezidakamizwa;
Ukunciphisa ukuphila komphakathi okusebenzayo, ukuzijabulisa, imikhosi, ukuvakashelwa kwemicimbi yomphakathi, ukuhamba nobuvila;
Ukulawula okugcwele imizwelo, ukugwema umona, ukufutheka, intukuthelo, ukuhaha;
Ukunamathela ngokuqinile emithethweni yomsoco we-Orthodox wamasonto nezinsuku zeLente 2017.
Imithetho Eyisisekelo Yokondla Kwalabo Abaqashile Ngama-2017
Imithetho yokudla e-Lent for people layers iqukethe ishadi lombhalo - i-tipicon. Abafundisi bama-Orthodox batusa izincomo ezilandelayo:
Iviki lokuqala nelokugcina ukugcina ukudla okuqinile kakhulu ngokudla okungavumelekile okungenani;
Noma yimaphi imikhiqizo yemvelaphi yesilwane ayinqatshelwe (inyama, ibhotela, ubisi, amaqanda, i-cottage shizi);
Ukudla kufanele kube nesidlo esisodwa ngosuku. NgoMgqibelo nangeSonto kukhona okuhlukile. Ngezimpelasonto ungadla kabili: kwasemini nakusihlwa;
NgoMsombuluko, ngoLwesithathu noLwesihlanu, ukudla okubandayo ngaphandle kwamafutha yemifino kuvunyelwe. NgoLwesibili noLwesine - ukudla okushisayo ngaphandle kwebhotela;
NgoMgqibelo nangeSonto, ungakhonza izitsha ze-lenten ngamafutha omifino kanye newayini levini;
NgoLwesihlanu wokugcina we-Lent (uLwesihlanu omuhle), ukudla akuvunyelwe. Uma kungenzeka, kufanelekile ukuphawula ukudla ngoMgqibelo ngosuku olulandelayo ngaphambi kovuko lukaKristu;
Uma Ukumenyezelwa kweNdodanakazi Ebusisiwe kungekho evikini lempiliso, kuvunyelwe ukuba udle izinhlanzi ezinamafutha.
Amandla kuLent 2017 ngosuku
Ngokuqinisekile, indlela efanele futhi eqondakalayo ekukhethweni kokudla ku-Lent 2017 ayiniki nje kuphela ukungabi khona kwesiteleka selambile, kodwa nokudla okungafani noma okungafani. Ngakho, ngesikhathi sokuzila imikhiqizo elandelayo ivunyelwe:
Izinkwa zokudla kanye nesinkwa esimnyama;
Amakhowe wokulungiselela okuhlukile (usawoti, oqoshiwe, abilisiwe, ebhaka ngaphandle kwebhotela);
Ukudla: ilayisi, ukunye okunye okufana nokolweni, i-oatmeal, ibhali, ukolweni, ummbila;
Ubhontshisi, i-peas, i-lentils;
Izithelo nemisindo igcina, ama-pickle nemifino eqoshiwe;
Uju, amantongomane, izithelo zomisiwe;
Izinhlanzi ezishaya izikhathi ezingu-2 ze-Lente yonke (yokwakhiwa kwe-Theotokos Engcwelengcwele nakwesiSunday Palm).
Kuye ngesonto lokuzila kanye nosuku lweviki, imikhiqizo kufanele ibe yinto eluhlaza (ebanda) noma ephekwe (eshisayo). Isibonelo, ngoMsombuluko, kuphela imifino eluhlaza, isinkwa, ujamu kanye nabanye, kanti ngoLwesibili - amazambane abilisiwe ngeklabishi elinezinyosi ngaphandle kwebhotela.
I-Power in Lent ngo-2017 yama-Orthodox abadayisi nsuku zonke: indlela yokukhetha ukudla kokudla
Kunezitsha eziningi ezithakazelisayo ezithandekayo ezifanele ukudla okunomsoco ngesikhathi seLente ngo-2017. Kodwa abaningi phakathi kwabo badinga ukhetho olufanele lwezithako zekhwalithi. Ukudla kwe-Lenten akuthandwa kakhulu ngokuthandayo, ngakho-ke kungcono ukhethe ukudla kokudla nokunye okunye.
Imifino. Kusukela ekuqaleni kokushesha, kuvunyelwe ukuba badle noma yimiphi imifino, kuhlanganise amazambane, izaqathe, beet, iklabishi, amaqabunga, i-zucchini, anyanisi, isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, utamatisi, ukhukhamba, i-pepper bell. Ungakhohlwa ngama saladi ebusika nemifino. Ngesizo semifino esiphunga, kulula ukunikeza ukudla okunomsoco ukunambitheka okuzwakalayo;
Izitshalo. Njengoba wazi, i-porridge ingumthombo omuhle wamaprotheni. Khipha ukudla kwakho okunamandla nama-peas nobhontshisi. Njengoba kuhlanganiswe nemifino nemifino, umkhumbi uzosebenza njengesikhumbuzo esihle kakhulu ngesikhathi seLent;
Inhlanzi nama-mushroom. Uma inhlanzi ivumelekile ekudleni kuphela kabili, amakhowe angadliwa cishe nsuku zonke. Bakwazi ukuthatha inyama futhi bagcwalise umzimba ngamavithamini namaminerali abalulekile;
Izithelo. Zonke izinhlobo zezithelo, zonyaka nezikhathi ezingavamile, zivunyelwe kwimenyu eqondile. Phakathi kwazo kukhona ama-apula, amapheya, amaplamu, izithelo ze-citrus, amajikijolo, amagilebhisi, njll. Ukusuka izithelo ungakwazi ukulungisa salads sweet, upheke compotes, cindezela fresh;
Amaswidi. Njengama-dessert ahlanzekile, asho uju, ushukela, ama-coat oatmeal. Izithelo ushukela, i-lollipops, ikhasino, ushokoledi omnyama. Ezinye izithako zingahlanganiswa, okwenza ukudla kudlule kakhulu. Isibonelo, amajikijolo enothokoledi, isaladi yezithelo ezomile, amantongomane nokugqoka uju, njll;
Iziphuzo. Awukwazi ukwenza Lent ngaphandle kokuphuza okumnandi. I-tea, ikhofi, i-jelly, uzvar, i-cocoa ehlanzekile noma iziphuzo kubisi lwe-soy avunyelwe. Ngezimpelasonto, ungakhonza iwayini lesidlo sakusihlwa.
I-2017 evelile: ikhalenda yokudla nsuku zonke
Ngokuqala kokuzila, indlela yokuphila nokucabanga kufanele ishintshe ngokuphawulekayo. Kubalulekile ukufihla imikhuba yabo, ukubeka eceleni izingubo zangaphandle kanye nezimonyo ezikhazimulayo, uye kwenye inkathi efanelekile yokuhamba nokuzijabulisa. Umgomo oyinhloko wezinsuku ezingu-47 zokuzila akuyona ukudla okulula kuphela, kodwa nokuthula nokulinganisela. Akudingekile ukuba unqotshwe yizinto ezingezansi, kodwa kungcono ukubona ubunzima nezinkinga njengezivivinyo. Ngezici eziningi kusiza inqubo yokuzila ikhalenda yekhwalithi yekhwalithi nsuku zonke. Ichaza konke okuvumelekile futhi okungamukeleki kumuntu wezwe wama-Orthodox. Ukulandela, kulula ukwenza ukudla futhi uthathe isidlo esifanelekile ngosuku. Nathi, sikunikeza ukudla okudlule isonto elilodwa, sibonisa imithetho yokudla okunomsoco kuwo wonke ama-canon:
Usuku lokuqala (ngoMsombuluko) - kubalulekile ukugwema ngisho nokudla okunomzimba;
Usuku lwesibili (ngoLwesibili) - isinkwa esimnyama, amanzi, kvass;
Usuku lwesithathu (ngoLwesithathu) ubumile (izithelo, imifino, ama-pickle, amakhemikhali, isinkwa);
Usuku lwesine (ngoLwesine) ukuqhubeka kokudla okunomsoco;
Usuku lwesihlanu (uLwesihlanu) - izithelo, imifino, isinkwa, iziphuzo ezingekho izidakamizwa, imifino iyancibilika ngamafutha akheniwe;
Usuku lwesithupha (ngoMgqibelo) - ukudla ngoLwesihlanu + ijusi lomvini + amafutha omifino amancane;
Usuku lwesikhombisa (iSonto) - ukudla okuphephile okuphekiwe ngamafutha omifino kanye newayini levini;
Izinkulungwane zabantu zaqala ukubona ukuqala kweLente, njengendlela yokuthambekela yesimanje. Phela, phakathi nalesi sikhathi, ungahle ulahlekelwe isisindo futhi ulondoloze, ubambelele kusuku emva kokuzila. Kodwa kubakholwa beqiniso bamaqembu angama-Orthodox lokhu kuthula ngokuthula, umkhuleko omude nokuzindla kwangaphakathi, ukuhlanzwa, ukukhululwa ezonweni. Ekudleni okusheshayo ngezinsuku nangamaviki, ngokuqinisekile, iwina indima ebalulekile. Kodwa kuphi okubaluleke nakakhulu, ngokulandela ikhalenda eqinile nemithetho eqinile, ukuhlala umuntu onokulinganisela, onomusa futhi omuhle.
Amakhukhi nge-walnut praline
I-Joke - puree kusuka ekholifulawa ngegalikhi kanye ne-parma
Indlela yokusekela intamo ku-tonus
Iresiphi elula yesitshalo semifino eqinile